Jaadka iyo Shacabka Soomaaliland maxaa kala heeysta?, Dadka cuno oo la sheegay qaarkood inay ku Qafiifeen
Shacabka Soomaaliland ayaa aad uga sheegtay cunista Qaadka oo fara ba´an ku haya Gobolada iyo Degmooyinka hoos yimaada deegaanadaas. Dadka cuna Qaadka ayaa qaarkood waxeey u ekaadeen dad Qafiif ah waxaana adag inay Koontaroolaan hadaladooda maadaama mudo aad u fog ay u fadhiyeen cunista Qaadka.
Haweenka iibiya Qaadka ayaa waxa ay sheegeen in uu yahay Qadka wax xun oo qaab daran balse ay danta ku kaliftay inay maalin kasta iibiyaan maadaama ay ka Bilaan Caruurtooda waliba iskaga bixiyaan Kirada Guryaha ay degan yihiin.
Mid ka mid ah raga cuna Qaadka ayaa isaga oo Marqaansan waxa uu yiri sidatan " Mar iigu dambeeysay Salaad aan Tukado ma garanayo, dhaqaalaheenii Qaad ayaa qaba balse waxaan qirayaa dhanka Shaqada marka aan Marqaan-sanahay aad ayuu iigu fududeeyaa Qaadka"
Dalka Somalia guud ahaan waa laga cunaa Qaadka balse ma jirto meel la mid ah Somaliland oo aad looga isticmaalo Qaadka waxaana taas sabab looga dhigay Beeraha uu Qaadka ka soo go´o ee dalka Itoobiya oo daris la ah Gobolada Somaliland.
WAA BARNAAMIJKEENII TIXANAHA AHAY EE CAAFIMAAADKA
EE CALICIID IDIIN SOO GUDBIN JIRAY
WAXA ISKALE OO SOO DIYARIYAY MAXAMAD XASAN XUSEEN KUNA DIYARSHAY BEEJKISA GAARKA XUQUUQDANA ASAGA LEH
Marmarka qaarkood, jirkaada ma awoodo inuu iska difaaco geermiga qaaxada ama tiibishada. Haddii aad la jirato jeermigaas waxaa loo yaqaanaa cudura qaaxada ama tiibishada. Jeermiga wuxuu badi ku dhacaa sambabada. Sidoo kale waxuu ku dhici karaa kalyaha, maskaxda, lafta dhabarka, ama qaybaha kale ee jirka.
Haduu cudurka qaaxada ama tiibishadu kugu dhaco, waxaad u baahantahay daaweyn. Waxaadna ku bogsoon kartaa daawen sax ah. Laakiin, hadaan lagu daaweyn waad u dhiman kartaa.
Jeermiga HIV-da wuxuu daciifiyaa (wiiqaa) difaaca jirkaada. Hadii aad qabto jeermiga Qaaxada ama HIV-da, waxaad halis u tahay inaad u jirato cudura qaaxada ama tiibshada
Baaritaanka TB-da ee jirkaada waxaa lagu sameeyaa gacanta. Labo ilaa saddex bari gudohood, ayuu daryeelaha caafimaadkaada fiirin doonaa gacantaada si uu u arko inuu dhacay fal kiimikaad. Soo barar "boosatiibo" ah macnaheedu waa inaad qabto geermiga TB-da.
Mararka qaarkood, hadii aad qabto jeermiga HIV-da iyo TB-da, laga yaabe in natiijada falgalka kiimikaad ee TB-da jirka ay lama hubaan "negatifo" noqoto. Taasna macnaheedu waa difaaca jirkaada oo aan si haboon u shaqaynayn. Daryeelahaaga caafimaadka ayaa kaala hadli doono hadaad halis u tahay geermiga TB-da ama cudurka Qaaxada. Laga yaabe inaad u baahato baaritaan kale oo caafimaad ama daaweyn.
la soco goor kasta webka
WWW.JORNALIZEM.COM OO DAR YEEL CAFIMAADKAADA
WAA CALICIID ISKU AADIYAHA BARNAAMIJKA CAFIMAADKA EE WEBKA
BARNAAMIJKEENI TIXANAHA AHAAY EE CAFIMADKA
WAXAN ISBUUCAN KU SOO QADANEENA BARNAAMIJKEENI TIXANAHA AHAAY EE CAFIMADKA EE KALA SOCOTEEN BAHDAWWW.JORNALIZEM.COM
WAX TARKA LIIMA DHANAANTA AY LEEDAHAY QAASATAN MIDA WADANKEENA KA BAXDA EE
CAGAARTADhowaan buug uu u qoray in dhaqtar ah oo ugu magac daray ” The miracles of Lemon” oo macnaheedu yahay Mucjisooyinka Liima dhanaanka ayaa waxaa uu ku soo bandhigay dhakhtarku faaidooyinka caafimaad ee laga helo Liimo dhanaanta noocyadeeda kala duwan walow aad loo ammaanay midda jaalaha ah ee badanaa wadankeena ka baxda.
Inaga aan soo wada koobi karin faaiidada ey leedhaay liima dhanaanku ayaa waxaa ku dareynaa laba cudrur somalida mararka qaar ku dhaca Cudur Shuban biyoodka ama Cholera iyo Malaariyada:
Kalsoonida Nafta… See Lagu Helaa Ama Lagu Waayaa ?
Hordhac : Ilaahay ayaa mahad leh Nebigeenana ( NNK) inata kadib. Kalsoonida naftu waa in qofku dareemo qiimaha naftiisu u leedahay waxyaabaha ku hareeraysan markaasna kalsoonidaa u turjumo dhamaan dhaqdhaqaayadiisa iyo hab dhaqankiisa isagoo aan khilaafayn caqliga iyo dhaqamada hufan dareemayna argagax iyo naxdin midna , dhaqamadiisa ayaana xukuma ee maya kuwa loo yeeriyo ama loo sheego Marka uu dhaqmaayo ama wax qabanayo wuxuu adeegsadaa awoodiisa aqooneed, hawlkarinimo iyo wax qabad, dhamaan waxii intaa kasoo hara waa kalsooni daro waxayna qofka ka dhigtaa qof dadka waardiye ka haya kee ku dayadaa(raacdaa) ama ka hadhaa waxaana lasoo dersa murugo iyo deganaansho la` aan go`aankasta iyo talaaba kasta oo uu qaadayo.
· Muhiimada Kalsoonida Nafta .
1. Wexey qofa dhaxalsiisaa dhaqamo toosan lana jaan qaada xaaladaha ku hareeraysan.
2. Kalsoonida naftu waxay qofka ka ilaalisaa dhaqmada cadaawada iyo aargoosiga.
3. Qofka naftiisa ku kalsoon wuxuu awoodaa helida khibrad nololeed, barashada dhaqamo iyo xirfado iyo inuu si fudud uguul gaaro kana dheeraado guuldarada.
4. Kalsoonida naftu waxay qofka dhaxalsiisaa aragtiyo shaqo, howl-karnimo iyo cusboonaysiin qaababkiisa wax qabad.
· Astaamaha Qoka Isku Kalsoon.
1. Waa mid jecel wax is barida iyo helida khibrado cusub.kana hortaga dhaqamada xun xun ama qalafsan
2. Wa mid dadkiisa iyo dalkiisa jecel ismana buriyo cadaawadna lagama dareemo.
3. Wuxuu yaqaan siduu uga hortagi lahaa dhibaatooyinka iyo mushikiladaha nolosha wuxuuna caan ku yahay go`aamo wan-wanaagsan waxtarna leh.
4. Wuxuu la jaanqaadaa is bedelada ka dhacaya deegaanada ku hareeraysan
· Maxaa Keena Kalsoonidarada:
1. Inaad aaminto In bulshadu ilaala kaa hayaan khalad kastoo kaa dhacana qorayaan.
2. Baqdin iyo deganaansho la` aan wax kastoo aad samayso una haysato inay garab marsanyihiin caadada dadkuna eedayn, canaan iyo liidid kuula imaandoonaan.
3. Dareemid inaad tahay shaqsi tabardaran suura galna aysan ahayn inuu wax hora marinkaro ama aaminto inaadan bulshada waxba ka ahayn.
Ila Eeg Akhriste:
Kalsoonida nafta wexey qofka usuura gelisaa inuu la qabsado deegaanka ku hareeraysan haday noqonlahayd qoyska, shaqada iyo saaxiibadaba. Inuu nolosha dhex jibaaxo kana guul gaaro.
Kalsoonida naftu waxay qofka ka dhigtaa mid mutawaadic ah aqoona u leh heerka uu bulshadiisa ka joogo wexeyna qofka dhaxalsiisaa horumar joogta kaaso ka dhasha dulqaadka iyo dadaalkiisa. Wuxuu qiimayyaa noloshuu ka soo gudbey wuxuuna daahfeydaa mustaqbalkiisa wuxuu ku kalsoonyahay naftiisa kuna farxaa guulihiisa una hanqal taagaa mustaqbal fiican.
Kalsoonida naftu waxay u baahantahay in qofku aqoon buuxda uleeyahay naftiisa iyo xaaladiisa caafimaad, rumayona naftiisa isaga oo aan xaqirayn ama weyneyneyn.
· Dhibaatooyinka Hor istaagi Kara Kalsoonida Nafta:
1. Hoos u dhaca maskaxda iyo Isku dhexyaaca dhanka fekerka .
2. Aqoon la`aanta, ilowga badan iyo guul daro shaqo.
3. Macsida faraha badan iyo alla ka cabsi la`aanta .
4. Firfircooni la` aanta iyo dhexgal xumida bulshada.
· 10 Qodob oo Kalsoonida Nafta Lagu Dhiso:
1. Ilaahay rumay magangelyona weydiiso hana ka caajisin.
2. Raja sami ku noolow waqtiyadoo idil samina ka muuji wax kastoo ka dhaca hareerahaaga.
3. Naftada run ka sheeg ujeedooyinka aad u nooshahayna caday awoodaadana baro.
4. Dareen fiican u lahow natiijada waxaad samayneyso ama samayndoonto.
5. Baro sida loo dheho (maya), wixii aadan niyad ama waqti u hayn.
6. Fikradahaaga cabir biya dhacoodana caday dadkana ku qanci.
7. Ahow qof nool muuji dareenkaaga dhegeyso,jirka ka hadal,aamus,tilmaan,ilmay,qosol.
8. Ha isku mashquulin waxa dadku kaa sheegaan wanaaga ka qaado.
9. Dardar howleed lahow, ha amaanin guulaha dadka kale, qor,dheh, fikrad ka dhiibo.
10. Qanac, raalina noqo xasiloonidana ilaali noloshaadana hagaaji.
Gabagabada: kalsoonidu waxay qofka dhaxalsiisaa Aragtida toosan, soo jiidasho, awood hadal, lafagurid iyo adeegsi ereyo haboon isuna dheeli tiran. Hadaba aan kobcino kalsoonida nafteena iyo wax u qabashada bulshadeena.
Qormadii:Dr.C/casiis Bandiirad Goonyacade.